Qore: Deeq Ali hayaan
Qabsashada Garacad Garabsiga UNta iyo Qorshaha Amisom
Waxaa la marayaa dagaalkii ugu danbeeyay ee ololaha doorashada somalia hadaba si loo meel mariyo rabitaanka beesha caalamka waa in la dhibaateeyaa meelo nabad ah maadaama kalmada Beesha caalamka ee aniga u aqaan beesha lixaad ee somalia ay tahay dhibta ugu weyn dalka.
Saddex su,aalood ayaa keenay Argagaxisada tolwadaaga yihiin beesha caalamka in ay qabsadaan deegaano ka mid ah puntland:
1. Dhul nabad ah oo ka hadal diidey beesha caalamka iskuna filnaadey?
2.Madax maamul oo leh anaga kama gudbi karno waxey dadkeena rabaan Iyagaan la tashaneynaa ?
3. Iyo Deegaan nabad ah oo Amisom joogin lana ilaalin oo leh ciidan dhul, ciidan birmad,ciidan kumadoos ah iyo ciidan badd .
Hadaba su,aalahaan waxaa ka dhex heli kartaa jawaabaha ah Badda somalia waxaa jooga Ciidanka Natto ah gaaraya qiyaas ahaan 9700 kun oo dalal kala duwan ka yimid iska daa in ciidan hubeysan oo doomo wata soo ag maraane waxaa dhib ku qabay kaluumaysatada hadaba hadii aan la fududeen ma aysan soo gudbeen ciidankaan qiyaas ahaanta lagu sheegay in ay gaarayaan 250 dagaal yahan oo alshabaab ah oo saanadooda iyo hubkooda iyo sahaydooda u dhamaystiran tahay .
Si loo helo arin la isku waafaqsan yahey ka hor Augost 2016 doorashada waa in la helaa xal xalkiina waxuu noqdey in la khalkhal galiyo deegaano nabad ah oo go,aan leh si loo qasbo.
Waxaan soo jeedinayaa Dowlada iyo Ciidanka iyo Shacabka iyo Muxaafid iyo Mucaarad intaba in loo midoobo sidii la iskaga celin lahaa kooxaha isbahaysiga qaawan ugu jira in ay gumaadaan dadkeena dalkeena iyo diinteena waa in aan ahaana dad isku fikir ah is dhiiri galiya isku kalsoon islana shaqeeya kana war haya xaalad kasta oo muhiim u ah jiritaankeena.
Waa in aysan ku sii fidin deegaan kale ee puntland ah in ay saldhig ka dhigtaan kana helaan gabaad ay ku dagaalamaan waana in la soo afjaraa waliba loo dhigaa taariikh aysan waligood danbe aysan ku soo dhiiran in ay dib danbe umad soomaaliyeed u dhibaan waxaan hubaa kuwaan waxaa soo afjarmay ajashoodii ee yaan loo dhibrinin.
Guusha Waxaan kaga dhargi doonaa labadayada sacabood mar dhow insha alaah .
Waad mahadsantihiin kuligiin wada jirkeenu ha jiro